Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Xirtay Shirkad Isgaarsiineed. – Calamada.com
Imaarada Islaamiga Afghanistan Oo Xirtay Shirkad Isgaarsiineed.
calamada August 27, 2019 3 min read
Bayaan kasoo baxay Lajnada qaabilsan la socodka shirkadaha Isgaarsiinta ee Imaarada islaamiga ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in Imaaradu ay go’aan ku qaadatay in gebi ahaanba albaabada la isugu dhufto xarumaha mid kamid ah shirkadaha isgaariinta ee wadanka kadib markii ay qeyb ka noqotay dagaalka lagu hayo Muslimiinta iyo Mujaahidiinta.
“Maadama shirkadda isgaarsiinta Salaam ay ka dhegaha ka furaysatay awaamiirta guddiga qaabilsan la socodka shirkadaha ee Imaarada, marar badanna loo digay, waxaan iclaaminaynaa in taawarrada iyo anteenooyinka shirkadan iyo xarumaheeda ay yihiin bartilmaameedyo millteri oo ay beegsanayaan Mujaahidiinta” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Imaarada Islaamiga Afghanistan.
“Waxaa gebi ahaanba la jaray internetka ay shirkadaas bixiso waxaana shaqaalaha qalabka iyo gawaarida shirkadaas ay Mujaahidiinta ula dhaqmi doonaan sida ay ula dhaqmaan dadka xiriirka la leh sirdoonnada cadowga” ayaa sidoo kale lagu yiri warka kasoo baxay Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan.
“Sababaha keenay in la xiro shirkadan, Mujaahidiintuna ay ku dhawaaqaan in ay beegsanayaan waxaa kamid ah,in Shirkaddu ay wada shaqeyn dhow la leedahay sirdoonnada Maraykanka iyo kan xukuumadda Kaabul iyadoo dhageysata codadka dadka isticmaalaya sidoo kalena xogta u gudbiso hay’adaha sirdoonka ee cadowga”.
Qodobka labaad ee ay Imaaradu u cuskatay go’aankan ayaa ah “In Shirkaddan ay ka dhaga adeygtay inay u hogaansanto amarrada ay Mujaahidiintu soo saarayaan ee ah in la damiyo isgaarsiinta xilliyada laga warhelo halis kusoo food leh dadka shacbka ah iyo Mujaahidiinta”
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 26-12-1440-Hijri.
Next: Askar Iyo Saraakiil Ku Dhaawacmay Shil Gaari Oo Kenya Ka Dhacay.